၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဧပြီလ ၁၀ ရက်ထုတ် အတွဲ (၇၃)၊ အမှတ် (၁၅) ပြန်တမ်းစာစောင်ကို စာပေဗိမာန်စာအုပ် အရောင်းဆိုင်များမှတဆင့် စတင် ဖြန့်ချိ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်ပြန်တမ်းများကို ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပုံနှိပ်ရေးနှင့် ထုတ်ဝေရေးဦးစီးဌာနက ထုတ်ဝေဖြန့်ချိလျက်ရှိရာ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဧပြီလ ၁၀ ရက်ထုတ် အတွဲ (၇၃)၊ အမှတ် (၁၅) ပြန်တမ်းစာစောင်ကို စာပေဗိမာန်စာအုပ် အရောင်းဆိုင်များမှတဆင့် စတင် ဖြန့်ချိ ရောင်းချလျက်ရှိပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ယခုတစ်ပတ်ထုတ် မြန်မာနိုင်ငံတော်ပြန်တမ်းတွင် အပိုင်း (၁) အပိုင်း (၂) နှင့် အပိုင်း (၄) တို့ ပါရှိပါသည်။
အပိုင်း (၁) တွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊
အပိုင်း (၄) တွင် NOTICE UNDER SECTION 348 OF THE MYANMAR COMPANIES LAW SHINDONGAH GENERAL CONSTRUCTION MYANMAR COMPANY LIMITED၊ NOTICE PURSUANT TO THE SECTION 348 OF THE MYANMAR COMPANIES LAW NAKATANI GUMI MYANMAR CO., LTD (MEMBERS' VOLUNTARY WINDING UP) (Company Registration No. 107635785)၊ In the matter of the Myanmar Companies Act Myanmar Con Yat Company Limited (Voluntary Liquidation) Final Meeting၊ Notice for Members' Voluntary Winding Up under Section 348 of Myanmar Companies Law (2017) Metrotelworks Telecommunications Private Limited (Registration No. 102286197)၊ HARBOUR SERVICES COMPANY LIMITED ဖျက်သိမ်းရန် ကြော်ငြာချက်၊ အမ်အမ်ဖိုက်ဂရု(ပ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် (MM5Group Company Limited) နှင့် ဒီအက်ပါးရွန်းနယူးလိုက် ကုမ္ပဏီလီမိတက် (The Upper Room New Life Company Limited) တို့ မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေ (၂၀၁၇) ပုဒ်မ ၃၄၈ အရ ကုမ္ပဏီကို ဆန္ဒအလျောက် ဖျက်သိမ်းကြောင်း ကြေညာခြင်း၊ ဝိုင် နက် အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက်သို့ ပြောင်းလဲရန် ကြော်ငြာချက်၊ UNPL Company Limited (Company Registration No. 102647572)၊ မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေအရ ဆန္ဒအလျောက် စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းရန် ကြေညာခြင်း၊ RYDER TRANSPORT (MYANMAR) COMPANY LIMITED မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေ (၂၀၁၇) အရ အစုရှယ်ယာရှင်များ ဆန္ဒအလျောက် ဖျက်သိမ်းရန် ကြေညာြခင်း၊ ကုမ္ပဏီဖျက်သိမ်းကြောင်းကြော်ငြာ POH MENG (MYANMAR) CO., LTD အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ ဆန္ဒအလျောက် ဖျက်သိမ်းခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။